Imibuzo evame ukubuzwa - iDanyang NQ Sports And Fitness Co., Ltd.
Ngingayithola nini ikhotheshini yezimpahla?
Ngokuvamile, sizokucaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuthola umbuzo wakho. Uma kushesha kakhulu, pls uxhumane nathi ngokuxhumana okuku-inthanethi, umthengisi wokuhweba noma ifoni yocingo!
Ingabe intengo yomkhiqizo ifaka ilogo? Ngingayenza kanjani i-logo yami yangokwezifiso nokupakisha?
Intengo yomkhiqizo efakwe kuhlu ayifaki i-logo, umkhiqizo uvame ukusebenzisa ukupakisha kwesikhwama se-poly. Ungaxhumana nokuthengisa kwethu ngentengo ethile uma udinga i-logo noma ukupakisha kwangokwezifiso.
Singathola isampula elilodwa ukuqinisekisa ngaphambi kwe-oda?
Yebo, bekungeke kube yinkinga ukuthola isampula elilodwa ukuze uqinisekise ngaphambi kokuthi sobabili sivume ngentengo! !
Ungakwazi yini ukwenza imiklamo yethu?
Yebo, akunankinga! Umane usinikeze izithombe kulungile, abaklami bethu bazokwenza izithombe zobuciko bokuzihlola ngokuya ngezithombe zakho!
Kuthiwani ngemigomo yokukhokha?
T / T, inyunyana yaseNtshonalanga, i-Paypal, i-Money Grame, njalonjalo.